४ महिना लामो लकडाउन अन्त्य : थाहा पाउनुहोस् कुन क्षेत्र खुले, कुन खुलेनन् ? – जीवनशैली
४ महिना लामो लकडाउन अन्त्य : थाहा पाउनुहोस् कुन क्षेत्र खुले, कुन खुलेनन् ?
Home /प्रमुख समाचार/४ महिना लामो लकडाउन अन्त्य : थाहा पाउनुहोस् कुन क्षेत्र खुले, कुन खुलेनन् ?
सरकारले आज मध्यरातिबाट लकडाउन खुला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत वर्ष ११ चैतबाट जारी भएको लकडाउन आज रातिबाट खुल्ने सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताए । आम नागरिकमा परेको मनोवैज्ञानिक त्रास कम गर्न लकडाउन खुला गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
लकडाउन खुले पनि अवस्था हेरेर निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने उनले बताए । सरकारले आज रातिबाट लकडाउन खुला गर्ने निर्णय गरे पनि शैक्षिक संस्था, धार्मिक तथा सामाजिक स्थलहरू, ट्युसन सेन्टर, सिनेमा हल, डान्सबार, सैलुन व्युटिपार्लर स्वीमिङ पुललगायतका क्षेत्र अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि बन्द नै रहने उनले बताए ।
यद्यपि, विद्यार्थी भर्ना परीक्षाफल प्रकाशनका काम १ भदौबाट गर्न सकिने निर्णय भएको उनले बताए । सरकारले १५ साउनबाट होटल, रेष्टुरेण्ट, ट्राभल र टेकिङ एजेन्सी र पर्वतारोहणसम्बन्धी कार्यालयहरू खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । सेमिनार र भेला भने गर्न नपाइने उनले बताए ।
१ भदौबाट लामो दूरीका सवारी साधन तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेका आवश्यक सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन सरकारले सबैमा आग्रह गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाको हकमा ३२ साउनसम्म आवतजावत बन्द गरिएको उनले बताए । स्वदेश आउनै पर्ने नागरिकको हकमा तोकिएका सीमा बिन्दुबाट आउन पाइने तर कुलीछीपी आएको खण्डमा कानूनअनुसार कारबाही हुने उनले बताए ।
चुरा-पोते व्यापारी भन्छन् – व्यापार नै छैन कसरी परिवार चलाउने ?
TAGS: डा युवराज खतिवडा लकडाउन
कोरोनासँग लक्षण मिल्ने डेंगीबारे बुझ्नुपर्ने कुरा
रेडियो नेपालले माग्यो ३९ कर्मचारी
प्रभु बैंकको शेयर कारोबार रोक्का, नेप्सेले सोध्यो स्पष्टीकरण
५९.५७ प्रतिशतले नेप्से घट्दा २ कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट
नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको फ्लाइट मिस, सडक मार्गबाट स्वदेश फर्किंदै